जसपा सरकारमा जान तयार, प्रधानमन्त्री ओलीले थाले यस्तो तयारी « Ok Janata Newsportal
जसपा सरकारमा जान तयार, प्रधानमन्त्री ओलीले थाले यस्तो तयारी
काठमाडौं । प्रतिगमनमाथि प्रतिगमन भएको थियो । एउटा प्रतिगमन संविधान बनाउँदाखेरि नै यहाँका मुख्य पार्टी एमाले, माओवादी र काँग्रेस मिलेर जनतामाथि गोली ठोकेर गरेका थिए ।
सहमतिको दस्तावेजका रुपमा रहेको अन्तरिम संविधानलाई च्यातेर १६ बुँदे बेइमानी पत्र गरेर प्रतिगमनकारी काम गरिएको थियो । त्यसमा केपी ओलीजीले थप प्रतिगमन गर्नुभयो । असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरिदिनुभयो, जो अधिकारकै थिएन । त्यसका विरुद्धमा हामी सबै मिलेर लड्यौँ ।
मैले अघि नै भनें, हामी सत्ताको खेलमा छैनौं । हामीलाई सत्ता भन्दा पनि हाम्रो मुद्दा प्रिय छ । वषौँदेखि जनताको सवाल सम्बोधन भएको छैन, त्यो गम्भीर कुरा हो । त्यसको सम्बोधनका लागि हामीले माओवादी, एमाले र काँग्रेसलाई भनेको हो ।
हाम्रा लागि सत्ताको नभई मुद्दाको सवाल हो । सत्ताको खेलमा हामी सहभागी हुँदैनौँ । हाम्रो मुद्दाबारे प्रधानमन्त्री, काँग्रेस र माओवादीमा नेताहरुलाई पनि भनेका छौं । अब हेरौं, मुद्दा के हुन्छ ।
आजको दिनमा काँग्रेस र एमाले मिलिदियो भने दुई तिहाइ हुन्छ । हामी जनता समाजवादी पार्टीको आवश्यकता छ र ? छैन नि । काँग्रेस, माओवादी र जसपाबीचको समीकरणको कुरा ग¥यो भने त्यहाँ हाम्रो आवश्यकता हुन्छ, त्यो पनि कल्पना कसरी गर्ने ? अहिले एमालेको सरकार माओवादीको समर्थनमा टिकेको छ । बहुमतको सरकार छँदैछ ।
मैले अघि नै भनें, हामी सत्ताको खेलमा छैनौं । हामीलाई सत्ता भन्दा पनि हाम्रो मुद्दा प्रिय छ । वषौँदेखि जनताको सवाल सम्बोधन भएको छैन, त्यो गम्भीर कुरा हो । त्यसको सम्बोधनका लागि हामीले माओवादी, एमाले र काँग्रेसलाई भनेको हो । हाम्रा लागि सत्ताको नभई मुद्दाको सवाल हो ।
सत्ताको खेलमा हामी सहभागी हुँदैनौँ । हाम्रो मुद्दाबारे प्रधानमन्त्री, काँग्रेस र माओवादीमा नेताहरुलाई पनि भनेका छौं । अब हेरौं, मुद्दा के हुन्छ ।